Simbi & Girazi Hookah
4 Zuva raBaba Chipo Pfungwa dzeCannabis-Shamwari Madzibaba - Greenway Magazini
ne admin pane 21-09-28
Kukungurutsa mubatanidzwa wakakodzera kana mudzanga chimiro cheunyanzvi, uye hunyanzvi hwakafanira kukosheswa. Vanhu vepaHarold vakaratidza kuonga kwavo nemasefa avo emaple, ayo aive akarongedzwa nemaoko kubva kuhuni chaihwo. Iyo ine simba Harold firita inowedzera kubata kwemapuri huni pamufananidzo, asi haina kukwana ...
Nzvimbo nyowani yenzvimbo yakavhurwa muWest Long Beach uye ikava "nzvimbo yekutengesa" yevanamuzvinabhizimusi vemuno
ne admin pane 21-09-22
Myesia Lowery ane makore makumi matatu nemasere Noel Russell IV, mushure memakore akati wandei vachimanikidza nekugadzira mazana ejuzi nekugadzira zvimwe zvigadzirwa, vakati dzimba dzavo munzvimbo yeLos Angeles dzakatanga kutaridzika semasangano pane nzvimbo rarama. Lowery akabva aona chikwangwani cherenti pane n ...
COVID-19 muEjipitori: 531 mitsva mitsva uye gumi nevanomwe vakafa neChitatu
Bazi rezvehutano revaIjipita nezveHurumende rakazivisa mazana mashanu negumi nematatu emakesi emakoronavirus neChitatu, nekufa kwevanhu gumi nevanomwe uye makumi mapfumbamwe ane makumi masere nepfumbamwe. Egypt yakazivisa huwandu hwezviitiko mazana maviri nemakumi mana nemakumi mana nezviviri, vanhu mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevasere vakafa uye vanhu makumi maviri nevaviri nemakumi mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nemana vakapora. Yechina wave yehutachiona munyika yapera zvizere, ne ...
Sherman anoshuma kuti iyo yakasviba mvura mushure mekudonha kwepombi ine hwema
ne admin pane 21-09-08
NeChipiri, pombi 72-inch iyo yakapa hafu yemvura yeguta rakaputika, ichimanikidza vagari kuchengetedza mvura yakawanda sezvinobvira kudzivirira kufashaira. "Takacherekedza kuti mvura inopinda munzvimbo yedu yekuchenesa mvura kuburikidza nepombi ine hwema uye neruvara, zvinova zvakajairika i ...
Atlanta tsotsi murume akapfurwa ndokuurawa kunze Encore Hookah bar uye lounge
ne admin pane 21-09-06
VERIFI inobatsira kusiyanisa pakati pechokwadi uye chenhema ruzivo nekupindura mibvunzo yako zvakananga. Kutsvaga "zvakabatana" zvemukati? Tarisa tsoka dzewebhu. ATLANTA-Atlanta mapurisa akati Chishanu mangwanani kuti murume mumwe akapfurwa "kakawanda" uye wechipiri akabatwa aive ...
Kunyudza Mvura LED Ice Cube
Mvura-yakanyudzwa LED inovhenekera mazaya echando, muviri unozongoerekana wajeka kana ukaiswa mumvura kana mazaya echando, pasina shanduko yekuchinja, hapana shanduko yemakemikari, isina-chepfu uye isina kukuvadza, uye inogona kuiswa mumhando dzese dzezvinwiwa kuti uwedzere rudo uye mhepo isinganzwisisike. Inoshandiswa zvakanyanya muv ...
Iyo inonyanya kufarirwa bar hookah uye zvinongedzo zvekuwedzera
ne admin pane 21-08-25
Pamusoro peiyo hookah yakatungamirwa yakataurwa muchinyorwa chakapfuura, pano ini ndichakurudzira zvimwe zvinoenderana zvine hookah zvinokodzera kutengeswa kwebhawa. Iyi nzira ndeyekufananidza akajairika magirazi hookahs ane LED mwenje mhete kana mabheseni, (sezvakaratidzwa pasi apa). Kubatsira kweiyi nzira kuri nyore uye kuchinjika. ...
Sehunyanzvi hweChinese hookah inogadzira, yedu vatengi base ndeye e-commerce Wholesale nemabhawa misika kuGerman, United States, neRussia. Ichi chinyorwa chine chinangwa chekukurudzira zvigadzirwa. Isu takanyora akanyanya-kutengesa hookah masitaera akakodzera mabhawa zviitiko. Kana zvasvika pamabhawa, chii chiri ...
Kubvira payakagadzwa, fekitori yedu yanga ichigadzira zvigadzirwa zvekutanga zvepasirese nekutevedzera mutemo
yemhando yekutanga. Zvigadzirwa zvedu zvakawana mukurumbira wakanaka muindasitiri uye inokoshakuvimbika pakati pevatengi vatsva nevakuru ..
Runhare: 86 183 6840 5178
Room 5-1, Kuvaka A, No. 777 Zhongguan West Road, Zhenhai Zone, Ningbo, Zhejiang, China